WARBIXIN: 12 Rikoor Oo Xiiso Leh Lagana Diwaan Galiyay Maalintii Ugu Dambaysay Horyaalka Premeir League – Kooxda.com
Home 2018 May Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: 12 Rikoor Oo Xiiso Leh Lagana Diwaan Galiyay Maalintii Ugu Dambaysay Horyaalka Premeir League
WARBIXIN: 12 Rikoor Oo Xiiso Leh Lagana Diwaan Galiyay Maalintii Ugu Dambaysay Horyaalka Premeir League
Horyaalka Premier League ayaa si Rasmi ah albaabada loogu xiray iyada oo maanta la ciyaaray kulamadii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedka 2017/2018.
Maanta ayayna dhicin lama filaano waaweyn iyada oo sidii la filayay toodbaadkii hore ay 4-ta ugu saraysa ku dhamaysteen kooxaha Man City,United,Tottenham iyo Liverpool kuwaas oo u soo baxay champions League xilli ciyaareedka dambe.
Dhanka Europe League kooxaha reer London ee Chelsea iyo Arsenal ayaa u soo baxay tartanka europe league xilli ciyaareedka dambe iyada oo kooxda Burnley is reeb-reeb u gali doonto Europe League.
Hadaba waxa aan halkan ku soo gudbin doonaa xogtii laga diwaan galiyay maalintii ugu dambaysay ee horyaalka premier League.
1.Xiddiga Riyad Mahrez ayaa ah xiddiga ugu badan ee xiddig kale goolal ka caawiya horyaalka xilli ciyaareedkan isaga oo 6 gool ka caawiyay Jamie Vardy.
2.Harry Kane waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Spurs ee dhaliya 40 iyo wax ka badan xilli ciyaareed kaliya tartamada oo dhan tan ilaa Clive Allen oo sidaas sameeyay 1986/1987.
3.Dwight Gayle ayaa ah ciyaaryahanka 3-aad ee kooxda chelsea gool ka dhaliya labada lugoodba xilli ciyaareedkan ka dib Laurent Depoitre iyo Roberto Pereyra
4.Mohamed salah ayaa gool ka dhaliyay xilli ciyaareedkan 17 kooxood oo kala duwan horyaalka premier league xilli ciyaareedkan waana xiddiga kaliya ee sidaas sameeya xilli ciyaareed kaliya taariikhda tartanka.
5.Marcus Rashford ayaa si toos ah ugu lug lahaa 17 gool 18kii kulan ee ugu danbeysay ee uu kusoo bilowdo tartamada oo dhan Old Trafford
6.goolkii madaxa ahaa ee uu Peter Crouch ka dhaliyay Swanea City ayaa ah goolkii 1000 ee uu ka dhaliyo hoyaalka Premier League.
7.Mohamed salah ayaa noqday xiddigii ugu horeeyay ee Liverpool ah ee caawinta iyo goolasha kor u dhaafa 10 tan ilaa Luis Suarez oo caawin iyo gool ka noqday 31 & iyo Steven Gerrerd 13&13.
8.Horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayaa noqon doona midkii ugu horeeyay ee ay laba xiddig dhaliyaan 30 gool Salah iyo Kane tan ilaa 1993/1994 markaas oo ay xiddigaha oo dhaliyay goolalkas halkan ku xusan(Andy Cole 34, Alan Shearer 31).
9.Kooxda Man City ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee hesha 100 dhibcood horyaalka heerka 1-aad ee Engaldn.
10.Xilli ciyaareedkan ayaa ah markii ugu horaysay ee uu Pep Guardiola ku guulaysto 100 dhibcood xilli ciyaareed kaliya xirfadiisa ciyaareed.
11.Kooxda Man city ayaa noqotay kooxdiisii ugu horaysay ee guul gaarta 32 kulan xilli ciyaareed kaliya horyaalka heerka 1-aad ee England.
12.Kooxda Man United ayaa badisay kulan kasta oo ay goolka ku hor mareen horyaalka premier League xilli ciyaareedkan iyaga oo badiyay 21 kula kooxda kaliya ee sidaas horay u samaysay ayaa ah Portsmouth oo sidaas samaysay 2007/2008.